N'IHI gịnị Katọlik? Archives - Okwu Ugbu a
Nọrọ, ma bụrụ Ìhè…
Ihe na February 5, 2018 February 7, 2018 by Mark
Izu a, Achọrọ m ịkekọrịta ọgbụgba ama m na ndị na - agụ akwụkwọ, bido na ọkpụkpọ m na - akpọ m ije ozi ...
THE ezinaụlọ kpọrọ nku. Egwu di egwu. Ọgbakọ ahụ dị anya ma kwụpụ. Mgbe ọ bụla m hapụrụ Mass na parish ihe dị ka afọ 25 gara aga, ọ na-adịkarị m ka owu anaghị atụ m ma ọ bụ karịa karịa oge m batara. Mụ na nwunye m so na di na nwunye ole na ole ndị ka gara Mass.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Mmekọrịta Gị na Jizọs
Ihe na August 26, 2015 April 29, 2017 by Mark
E bipụtara ya na October 5th, 2006.
NA ihe odide m na mbubreyo na Pope, uka Katoliki, Nne di ngo a, na nghota nke otu eziokwu nke Chineke si aputa, obughi site na nkowa nke aka, kama site na ikike ikike nke Jisos, anatara m ozi email na nkatọ ndi n’adighi ndi Katoliki ma ọ bụ kama nke ahụ, ndị bụbu ndị Katọlik). Ha atụgharịala okwu m na-agbachitere ndị isi ọchịchị, nke Kraịst n'onwe ya hibere, nke pụtara na mụ na Jizọs enweghị mmekọrịta; na e nwere otu m kwenyere na a zọpụtara m, ọbụghị site n'aka Jizọs, kama ọ bụ site na Pope ma ọ bụ bishọp; na ejupụtaghị m na Mụọ, kama “mmụọ” nke na-eme ka m kpuo ìsì ma nwee nzọpụta.
Dynasty, obughi ochichi onye kwuo uche ya - Nkebi nke abuo
Ihe na December 19, 2011 April 17, 2017 by Mark
Onye na -ese ihe amaghị
NA ihe arụ na-aga n'ihu na-abịa n'ihu na Chọọchị Katọlik, ọtụtụ—gụnyere ndị ụkọchukwu- na-akpọ oku ka Nzukọ-nsọ ​​dozigharị iwu ya, ọ bụrụ na ọ bụghị okwukwe ntọala ya na akparamagwa ndị dị na nkwụnye ego nke okwukwe.
Nsogbu di, n ’uwa nke oge a nke referendum na ntuli aka, otutu amaghi na Kraist guzobere a usoro ndị eze, ọ bụghị a ochichi onye kwuo uche.
Nke Na-wuru na Aja
Ihe na April 2, 2009 April 17, 2017 by Mark
Katidral Canterbury, England
EBE AHỤ bụ a Nnukwu Oke Ifufe na-abịa, ma ọ bịarutelarị, ebe ihe ndị ahụ ewuru n’elu aja na -adabasị. (Nke izizi bipụtara n'October, 12th, 2006.)
Onye ọ bụla nke na-ege ntị n’okwu m ndị a ma ọ naghị eme ha, ọ ga-adị ka onye nzuzu nke wukwasịrị ụlọ ya n’elu ájá. Edịm ama edep, ukwọ ama edi, ofụm ama ofụme ufọk oro. O wee daa ma bibie ya kpamkpam. (Matthew 7: 26-27)
Ugbua, ikuku nke udo nke na-ebugharị agbawaala ọtụtụ ụka dị iche iche. United Church, Anglikan Church of England, Lutheran Church, Episcopalian, na ọtụtụ puku ụka ndị ọzọ ebidola ịbata osụk mmọn̄ ukwọ nke omume relativism paụnd na ntọala ha. Ikike nke ịgba alụkwaghịm, ịmụ nwa, ite ime, na alụm di na nwunye emebisịla okwukwe ahụ nke ukwuu nke na mmiri ozuzo amalitela ihichapụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị kwere ekwe na ọnụ ha.
Ihe Abụọ Mere to Ga-eji Bụrụ Katọlik
Ihe na April 10, 2008 April 17, 2017 by Mark
Gbaghara nke Thomas Blackshear II dere
AT ihe omume mere na nso nso a, otu di na nwunye na-eto eto lụrụ di na nwunye Pentikọstal bịakwutere m wee sị, "N'ihi edemede gị, anyị na-abụ ndị Katọlik." Enwere m ọ withụ ka anyị na-agbakụ ibe anyị, na-enwe a thatụrị na nwanne nwoke a na nwanne nwanyị nọ n’ime Kraịst gaje ị nweta ike na ndụ Ya n’ụzọ ọhụrụ na omimi - ọkachasị site na Sacrament nke Nkwupụta na Holy Eucharist.
Yabụ, lee ihe abụọ "enweghị nchekwube" mere ndị Protestant ga-eji bụrụ ndị Katọlik.
Ihe na October 10, 2006 April 17, 2017 by Mark
ECHICHE, emezighị emezi, na ime mmehie.
Mgbe ọtụtụ ndị mmadụ lere ndị Katọlik anya na ọkachasị ndị ụkọchukwu (ọkachasị site n'ekpere nke mgbasa ozi ụwa), Chọọchị na-adị ha ka ihe ọ bụla ma Onye Kraist.
Àmà Onwe Onye
Ihe na October 6, 2006 February 5, 2018 by Mark
Okechukwu van Rinj, 1631, Onyeozi Peter Kneeling
Ncheta nke St. BRUNO
BANYERE afọ iri na atọ gara aga, otu enyi anyị bụbu onye Katọlik kpọrọ anyị na nwunye m, ma anyị bụ ndị Katọlik, ka anyị bịa ụka Baptist.
Anyị na-ewere ọrụ ụtụtụ Sọnde. Mgbe anyị rutere, ihe niile dakwasịrị anyị ozugbo ndị na-eto eto. Ọ bịara doo anyị anya na mberede otu ole na ole ndị na-eto eto nọ ebe ahụ laghachi na parish Katọlik nke anyị.
Ugwu, Ugwu, na mbara ala
Ihe na October 4, 2006 June 3, 2019 by Mark
Foto Michael Buehler sere
Ncheta nke St. FRANCIS nke ASSISI
Enwere m ọtụtụ ndị Protestant na-agụ akwụkwọ. Otu n’ime ha degaara m akwụkwọ banyere isiokwu ahụ mere n’oge na-adịbeghị anya Atụrụ m Ga-ama Olu M N’oké Ifufe, ma jụọ:
Ebee ka nke a hapụ m dịka onye Protestant?
Jizọs kwuru na ya ga-ewukwasị nzukọ Ya n’elu “oke nkume” - ya bụ, Pita — ma ọ bụ n’asụsụ Arameik nke Kraịst: “Sifas”, nke pụtara “oke nkume”. Yabụ, chee maka Nzukọ-nsọ ​​mgbe ahụ dịka Ugwu.
Hikwụ ụkwụ na-ebute ugwu, yabụ m na-eche maka ha dịka “Baptizim”. Otu gafere n’ugwu ukwu wee ruo Ugwu.
Atụrụ m Ga-ama Olu M N’oké Ifufe
Ihe na October 3, 2006 October 25, 2019 by Mark
Nnukwu ngalaba nke ọha mmadụ nwere mgbagwoju anya banyere ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi, ma na-emere ndị nwere ikike “ike” echiche ma tinye ya na ndị ọzọ. —PỌPỌ JOHN PAUL II, Ogige Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993
AS Edere m na Opi nke ịdọ aka na ntị! - Nkebi nke V, e nwere oké mmiri ozuzo na-abịa, ọ dịkwala ebe a. A oke mmiri ozuzo nke mgbagwoju anya. Dị ka Jizọs kwuru,
Oge awa na-abịa, n'ezie ọ bịawo, mgbe a ga-achụsasị gị… (John 16: 31)